भारतीय समाचार च्यानल फेरि प्रसारित, बन्द भएका अन्य सञ्चालनमा नआउने सम्भावना
July 13, 2020 9:51 pm
गत हप्ता स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालमा भारतीय समाचार च्यानलहरूको प्रसारणमा रोक लगाएका एक दर्जनजति टीभी सेवा प्रदायकहरूले उक्त सहमति परिमार्जन गर्दै जी टीभी नेटवर्कअन्तर्गतका सबै समाचार च्यानलसहित केही च्यानलबाहेक अन्यको प्रसारण पुनः सुरु गरेका छन्।
म्याक्स टीभीका अध्यक्ष दिनेश सुवेदीका अनुसार जी नेटवर्कअन्तर्गत रहेका सबै समाचार च्यानलसहित आज तक, इन्डिया टीभी र एबीपी न्यूजको प्रसारणमा लगाइएको रोक भने कायमै छ।केही च्यानलहरूले प्रसारण गरेको सामग्रीका आधारमा सबैमा रोक लगाउन नहुने आफूहरूको समझदारी र केही ग्राहकहरूबाट समेत त्यस्तै बेहोराको गुनासो आएका कारण आफूहरूले लिखित रूपमै पछिल्लो निर्णय गरेको सुवेदी बताउँछन्।
पछिल्लो समयमा एउटा भारतीय समाचार च्यानलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई जोडेर तयार पारेको समाचारले आफूहरूलाई प्रसारणमा रोक लगाउने जस्तो कदम उठाउन बाध्य पारेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ। उक्त सामग्री जी नेटवर्कअन्तर्गतको एउटा समाचार च्यानलमा देखाइएको थियो। पछि उसले त्यो सामग्री त्रुटिवश प्रसारित भएको भन्दै खेद प्रकट गर्‍यो। प्रतिक्रिय स्वरूप उक्त नेटवर्कका सबै समाचार प्रसारणमा रोक लगाइएको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन्।
कहिले खुल्ला? प्रसारणमा रोक लगाइएका विदेशी च्यानलहरू कहिलेबाट सञ्चालनमा आउलान् वा के भएको खण्डमा ती च्यानलहरूको प्रसारण गरिनेछ भन्ने विषयमा भने सेवा प्रदायकहरू अस्पष्ट देखिन्छन्। भारतीय समाचार च्यानलहरूले प्रसारण गरेका सामग्रीबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट नै पठाएर आफ्नो विमति जाहेर गरेको सरकारले पनि प्रसारण रोकिएका च्यानलहरू खुलाउने विषयमा अग्रसर देखिँदैन।
भारतीय समाचार च्यानलहरूको प्रसारण रोक लगाएपछि प्रदायकहरूले सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि भेटेका थिए। उक्त भेटमा मन्त्रालयले पछिल्लो प्रकरणमा ठोस धारणा नराखेको तर ‘नियमन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदायकहरूले उठाएको कदम स्वागतयोग्य रहेको’ आशयको अभिव्यक्ति दिएको दुई प्रदायकले बीबीसीलाई बताए। “प्रसारण बन्द गरिएका भारतीय च्यानलहरूले माफी मागेको वा कूटनीतिक पहलबाटै कुनै किसिमको निकास आएको अवस्थामा हामी च्यानल पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछौँ,” मेरो टीभीका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश घिमिरेले भने।
किन बन्द गरिएको थियो? “अधिकांश ग्राहक अझै पनि भारतीय समाचार च्यानल प्रसारणको विपक्षमै छन्,” उनले भने। प्रदायकहरूले आफूखुसी समाचार च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएको भन्दै विरोधका आवाज सुनिएका बेला घिमिरे भन्छन्, “हाम्रो नेटवर्कबाट प्रसारण हुने सामग्रीका विषयमा जिम्मेदार बन्दै यस्तो कदम उठाएका हौँ।”
सुवेदीका अनुसार आफूहरूलाई सरकारले दिएको प्रसारणसम्बन्धी अनुमतिपत्रमै ‘जुनसुकै च्यानलले दिएका जेसुकै सामग्री प्रसारण गर्न नपाइने’ उल्लेख गरिएको छ। “गलत सामग्री प्रसारण भएको खण्डमा रोक्ने अधिकार अनुमतिपत्रमै छ,” उनले थपे। जिम्मेवार नागरिकका रूपमा समेत आफूहरू पछिल्लो कदम उठाउन बाध्य भएको प्रदायकहरूको भनाइ छ। प्रदायकहरूको भनाइ र पछिल्लो समय उत्पन्न विवादबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।
‘प्रसारण सदाका लागि बन्द हुनसक्छ’: सुवेदीका अनुसार आगामी अक्टोबर महिनाबाट नेपालमा विज्ञापनरहित (क्लीन फीड) नीति लागु गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लीन फीड नीति लागु भए सर्वसाधारणहरूले विदेशी च्यानल हेर्दा अन्य देशका बजारलाई लक्षित विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन।
त्यस्तो अवस्थामा यी च्यानल आफैँ बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने सुवेदी बताउँछन्। “नेपालमा यी च्यानलका वितरक छैनन्। क्लीन फीड ल्याएर कसले दिने त? उनीहरूको च्यानल कसले विज्ञापनरहित बनाइदिने?” सुवेदीले भने।
“हामी खोज्दै जाने कुरा भएन। उनीहरू आफैँ आए भने राखिदिन्छौँ। पैसा मागे शुल्क तोकिदिन्छौँ र छनोटका लागि ग्राहकहरूकहाँ राखिदिन्छौँ।” अहिले नै च्यानलहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको र क्लीन फीड लागु हुँदासम्म च्यानल खुल्ने वातावरण नबने सदाका लागि ती च्यानल बन्द हुनसक्ने प्रदायकहरू बताउँछन्।
“विदेशी विज्ञापन वा नेपालीमा ‘डब’ गरिएका विदेशी विज्ञापन नबजाउने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा आउँदैछ। त्यस बेलासम्म नखुले त यी च्यानल आफैँ जान्छन्, किनभने हामीले यस्ता च्यानल प्रसारण गर्न मिल्दैन। तर यो समयले देखाउने कुरा भयो,” घिमिरेले भने। जानकारहरूका अनुसार भारतीय टेलिभिजन च्यानल हेरेबापत नेपालबाट वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिन्छ।- बीबीसी